C57BL /6ကြွက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ထုတ်ယူခြင်းအတွေ့အကြုံများပြီးနောက်အီသနောသောက်သုံးမှုတိုးလာခြင်း - Your Brain On Porn
ထပ်ခါတလဲလဲနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့် C57BL /6ကြွက် (2004) တွင်ရုပ်သိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပြီးနောက်တိုးမြှင့်အီသနောအရက်သောက်
အရက် Clin Exp Res ။ 2004 Dec;28(12):1829-38.
Becker က HC1, လိုပက်ဇ် MF.
မှီခို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအီသနော၏ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် ပတ်သက်. သိသာထင်ရှားသောစိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။ ကျနော်တို့သိမ်းယူမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးတခြားလက္ခဏာတွောင်းပြကြောင်းအီသနောမှီခိုနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲထုတ်ယူတဲ့ mouse ကိုမော်ဒယ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ ထိုသို့သောအတှေ့အကွုံအီသနောအရက်သောက်အပြုအမူသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်၏ပစ္စုပ္ပန်စီးရီးနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ထပ်ခါတလဲလဲသံသရာဆန္ဒအလျောက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအီသနောမှနောက်ဆက်တွဲလှုံ့ဆျောမှုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ကြသည်။
တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် sucrose-နွမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး C57BL / 6J ကြွက်ကန့်သတ် access ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (15 နာရီ / နေ့) တွင် 2% (v / v) အီသနောသောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စမ်းသပ်ချက်ကာလအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆုံးရှုံးအစားအစာသို့မဟုတ်ရေကြဘူး။ တည်ငြိမ်အခြေခံစားသုံးမှုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်ပြီးတာနဲ့ကြွက်ဆုတ်ခွာ၏ 16-နာရီကာလအားဖြင့်ကွဲကွာမွှန်အခန်းအီသနောအခိုးအငွေ့ (သို့မဟုတ်လေထု) ၏ 8 နာရီလေးသံသရာထိတွေ့ခဲ့သည်။ အီသနောထိတွေ့မှု၏နောက်ဆုံးသံသရာပြီးနောက် 32 နာရီမှာအားလုံးကြွက်5ရက်ဆက်တိုက်ကန့်သတ်လက်လှမ်းအခြေအနေများအောက်တွင်အီသနောစားသုံးမှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များထို့နောက်အီသနောအရက်သောက်ဘို့အခြား5ရက်ကြာစမ်းသပ်ကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ဒုတိယစီးရီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ရွေးချယ်စရာအဖြစ်တင်ပြသည့်အခါတည်ငြိမ်နေ့စဉ်အခြေခံစားသုံးမှုတစ်ယောက်တည်း 15% အီသနော (စမ်းသပ်မှု 5), 1% sucrose (စမ်းသပ်မှု 15) နဲ့ပေါင်းစပ် 2% အီသနောသောက်ကြောင်းကြွက်များတွင်တစ်ဦးတည်း 5% sucrose (စမ်းသပ်မှု 3), သို့မဟုတ် 15% အီသနောကိုထူထောင်ခဲ့သည် (4 စမ်းသပ်) ရေနှင့်အတူ။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတှေ့အကွုံထပ်ခါတလဲလဲသံသရာပြီးနောက်, အီသနောဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုအခြေခံအဆင့်ဆင့်ကျော်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (Air-ထိတွေ့) အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် sucrose စားသုံးမှု 5% sucrose သောက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြကြောင်းကြွက်များတွင်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအတှေ့အကွုံပြီးနောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်တိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့အသှေးကိုအီသနောအဆင့်ဆင့်အတွက်သိသိသာသာတိုးခဲ့သည်။
အီသနော၏အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုတည်ဆောက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းမှုအတွေ့အကြုံများသည်ဆန္ဒအလျောက်အီသနောသောက်သုံးမှုတွင်သိသိသာသာတိုးလာပြီးရလဒ်မှာသွေးတွင်းအီသနောအဆင့်ကို> ၂ ဆတိုးစေခဲ့သည်။ အီသနောစားသုံးမှုတိုးပွားလာမှုသည်အီသနောကိုသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့ရည်နှင့်တစ်မျိုးတည်းရောစပ်။ သော်လည်းကောင်း၊ ရေမရသည့်ရွေးချယ်မှုအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်းရောနှောခြင်းရှိမရှိဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အီသနောကိုရွေးချယ်ပုံရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် sucrose solution ကိုသောက်ရန်လေ့ကျင့်ထားသောတိရိစ္ဆာန်များသည်အလားတူနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှုပြီးနောက်သူတို့၏စားသုံးမှုပြောင်းလဲမှုကိုမပြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ဒီမော်ဒယ်နာတာရှည်အီသနောကုသမှု abstinence (relapse) ၏အချိန်ကာလပြီးနောက်အရက်သောက်ပြန်လည်လှုံ့ဆျောမှုသြဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ယန္တရားများနှင့်အခြေအနေများလေ့လာနေအတွက်အသုံးဝင်ပေမည်။